Malunga nathi | Shenzhen Lianchuang iTekhnoloji yeQela Co, Ltd.
Yasekwa nge-Sep.8, i-1993, i-Shenzhen Lianchuang Technology Group Co, Ltd, kunye neqela lamaqela yinkampani yanamhlanje esebenza ngokukhethekileyo kwiZibonelelo zeKhaya kunye nezipho zeShishini. Ukuza kuthi ga ngoku, Iqela leLianchuang sele linenkampani ezixhasayo ezili-13, phakathi kwazo, iShenzhen Lianchuang Electrical Application Viwanda Co, Ltd izibophelele kwimpahla yasekhaya enezixhobo ezigubungela iiMoola Coolers, iiheather zoMbane, iiFani zoMbane, iiFuidifiers.
I-Shenzhen Lianchuang Technology Group Co, Ltd idibanisa i-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neenkonzo, okwangoku kubambelela ekuzivuseleleni ngesikhokelo sezidingo zabathengi. Ukuza kuthi ga ngoku, uLianchuang uphumelele ngaphezulu kwe-1000 iintlobo zamalungelo awodwa abandakanya iipatent zoyilo, amalungelo awodwa obunikazi
Kumbono wexa elizayo, iShenzhen Lianchuang Technology Group Co, Ltd iya kuwugcina umoya "Wobungcali, uMgangatho kunye noVuselelo oluTshintshileyo", itshintsha isuka kwishishini lokuthengisa isiya kwinkampani yokudala, kwaye ekugqibeleni idlulisele kwinkampani ebanzi enempembelelo.
Isicoci soMoya kunye neWashe (DF-HU29100)
Umjikelo we-red red dot product product